Ukwenza ukuSebenzisana kweeVenzi zaseSpain eziQhelekileyo neziQhelekileyo
Ukwenza imo yokuzithoba yezenzi zaseSpain kulula kakhulu, ngaphandle kolawulo olubi phakathi kwabafundi abaninzi baseSpain. La macandelo alandelayo akubonisa ukuba ungaziguqula njani izenzi zexesha langoku ezingaqhelekanga zibe zizalamane zazo ezilawulayo.
Wenza ukuzithoba okwangoku kwezenzi ngokushiya i -okanye isuka e mna Uhlobo lwexesha langoku kunye nokudibanisa iziphelo ezizenzekelayo, ekulula ukuzikhumbula kuba -Kunye Izenzi zisebenzisa iziphelo zangoku -si izenzi, kunye -si kwaye -ir Izenzi zisebenzisa iziphelo zangoku -Kunye izenzi. Kungenxa yeso sizathu le nto abantu besithi uyila indlela yokusebenza ngoku usebenzisa isiphelo sesenzi esichaseneyo kwisiqu. Nantsi imizekelo embalwa:
Kubalulekile ukuba ndithethe nabazali babo. (Kubalulekile ukuba ndithethe nabazali bakho.)
Kubalulekile ukuba uyiqonde imigaqo. (Kubalulekile ukuba uyiqonde imigaqo.)
Izenzi ezingaqhelekanga kwifayile ye- mna ifom
Ezinye izenzi aziqhelekanga kwifayile ye- mna ubume bexesha langoku. Ezi zenzi zisebenzisa isiqu se mna ukwenza ulawulo lwangoku. Uwisa umdlalo wokugqibela -okanye isuka e mna form kwaye ungeze iziphelo ezichaseneyo. Ke izenzi ezinento engekhoyo ngoku mna iifom ezinje ndine (ndinayo) kwaye beka (ndibeka) basebenzise ezo fom ukwenza umzala wabo (Unayo, ubeka).
Ezinye izenzi azihambelani ngokupheleleyo kwimeko yokuzithoba, oko kuthetha ukuba awukwazi ukulandela nayiphi na imigaqo okanye iipateni zokuzenza. Kufuneka uzibambe ngentloko:
Iilwimi ezingaqhelekanga kwi-Subjunctive
nika ukunikeza Nika, unike, unike, unika, unika, nika
ukuba ukuba kuba, sikhona, sikhona,
kwaye ukuhamba hamba hamba hamba hamba hamba hamba
ukwazi ukwazi yazi, yazi, yazi, masazi, yazi, yazi
ukuba ukuba Yiba, ubekho, ubekho, ubekho
Nayi eminye imizekelo ebonisa oku kusenziwa kwezitenxo:
Sibuhlungu kukuba umakhulu wakho uyagula. (Sibuhlungu ukuba umakhulu wakho uyagula.)
Ndiyathandabuza ukuba uyayazi indlela yokulungisa ikhompyuter. (Ndiyathandabuza ukuba uyayazi indlela yokulungisa ikhompyuter.)
yintoni iziyobisi ze-roxy
Ukudibana kweediliya kunye neyeza
Ungawusebenzisa njani umlilo?